Dubartoonni bebbeekamoo 'saal-qunnamtiif maallaqa guddaa kennamuufiin maaliif maqaa isaanii gurguruu?' - BBC News Afaan Oromoo
Dubartoonni bebbeekamoo 'saal-qunnamtiif maallaqa guddaa kennamuufiin maaliif maqaa isaanii gurguruu?'
Dubartoonni miidiyaa hawaasummaarratti bebbeekkamoo ta'an guyyaa guyyaadhaan namoota hin beekamneen maallaqni guddaan kennameefii saal-qunnmatiidhaaf akka gaafataman sagantaan beekamaa Viiktooriyaa Derbiishiireerratti himame.
Dubartiin tokko akka jettutti miidiyaan hawaasummaa bakkaafi karaa dhiironni dubartii argachuu barbaadaniifi natti dhiyaatti jedhan akka filataniif "tartiibaan" itti dhiyaatudha.
"Kun hojii sagaagalummaa guddaadha. Ergaa naaf erganiiru jedhee yaaduun baay'ee na sodaachisa; ergaa naaf ergan sana Instagram irratti dubartoota biroo hedduuf erganiiru ta'a," jetti Taayine-Leekiy Kilaarsan.
Dubartiin kun akka jettetti, yeroo jalqabaaf namni afeerraa irbaataafi dhugdaatii halkan tokko qofaaf maallaqa £20,000 kennuuf umuriin ishee ganna 19 ture.
Erga sangataa Love Island irratti si'a lama erga hirmaattee beekamteen booda imeelii dhaabbata tokkoo Dubaayi keessatti guyyoota shaniif yoo turte £50,000 siif kennina ergaa jedhu argite.
Ergichis maal akka isheen guutuu qabdu kan of keessaa qabuufi wanti hundi icciitiidhaan akka eeggamu ibsa.
Taayine-Leekiy Kilaarsan akka jettutti, kennaa maallaqaa siif kennama jedhame fudhachuu akka didde dubbatti.
Ta'us garuu, dubartoonni bebbeekkamoo wantoota qananii ta'an barbaadan ofiisaaniitiin guuttachuu hin dandeenye yeroo baayyee wantoota akkanaatiif saaxilaman akka ishee yaachisan himti. [Maallaqa karaa fedhii warra saal-qunnamtiif isaan barbaadurraa argatan saniin guutachuu mal jechuudha.]
"Namoota tokko tokkoof kun maallaqa guddaadha. Maallaqa jireenyasaanii ittiin jijjiirachuu danda'aniidha.
Heerumuuf jecha dubartoota dhaqna qabachuuf dirqaman
Roozii Wiiliyaams sagantaa Love Island irratti kan dhiyaatte yoo ta'u, dhiira tokko waliin Dubaayitti akka waliin turtuuf maallaqa £100,000fi waggaa tokkoof uffataafi borsaa ishee barbaachisu akka kennaniif ishee gaafachuu dubbatti.
Rooziin ergaa yeroo dhihoo kana dhiirri tokko Dubaayirraa akka ta'etti ergaa ergeef ture nuttiyyu agarsiifteetteetti. Ergaa namni kun ergeef baayyee kan ishee ajaa'ibe ture. Namni kun "maallaqa gudda nama qabudha" waan ta'eef akka jecha baramaa ergaa akkasii keessatti barameen qabeenya qabu kana 'qooduu barbaada' jetti.
Haata'u malee, hangam maallaqaa guddaan sossobamanillee garuu hin gowwoomneef jetti.
Rooziin akkas jetti: "Yeroo baayyee waa'ee jireenya keetii ni gorfamta, akkamitti wantoota argachuu akka dandeessus ni gorfamta, garuu guyyaa tokko maallaqaan dhiirotaan akka bitamtu si hin gorsan."
Dabalataanis dubbiin akkasii kun namoota dhiibbaa guddaa uumuu danda'an gidduutti yeroo baayyee hin dubbatamu jetti. "Nutiyyu waa'ee dhimma kanaa dubbataa hin jirru yookiin dubbannee deebinee itti qaanofna."
Goodayyaa suuraa Dubartoonni maallaqaaf jecha saal-qunnamtii akka raawwataniif ragaa qabna.
Sagantaan Viktooriyaa dhimma kana mariiisisuun beekamu kun odeeffannoowwan dubartoota bebbeekkamoo ta'aniif fedhii saal-qunnamtiif akka namoonni qabeenya qaban isaan gaafatan hedduun ni qaqqabu. Yeroo baayyee ergaan dubartoota beekamtii qabaniif fedhii akkasiitiif dhufan karaa lamaan.
Tookkoffaan, namoonni fedhii saal-qunnamtiif ofumaaf kallattiin gaaffii ergatanidha. Lamaffaan ammoo, karaa [dallaalotaa] bakka maamila sooressaa bu'uudhaan namoonni gidduu seenuun dubartoota bebbeekamoo kana itti gaafatanis ni jiru.
Ergaa dubartii beekamtuu Biriitish ofiin jettu tokkorraa arganne akka jedhutti, guyyaa ayyaanaa tokko qofaaf saal-qunnamtii akka raawwattuu £10,000 akka kennameef dubbatti.
"Isaabeel" jalqaba dhiira umuriin isaa ganna 10'n ishee caaluun gaafatamte. gaaffiin kun kan dhiyaateefis erga isheen agarsiisa dandeettii ofii mul'isuu TV Talent Show irratti dhiyaateen boodadha jetti. caalan irraa gaaffii akka dhiyaateef TV irratti dubbattee jirti.
"Jalqabarratti borsaa harkaa diizaayinaraan hojjatametu naaf kenname.
Namni kun qabeenya guddaa waan qabuuf borsaa naaf qopheesse sanatti maallaqa kumaatamaan waan baaseeruuf saal-qunnamtiidhaaf akka na barbaadhu natti hime," jechuun dubbatti.
Fudhataman hordoftootakoo onlaayinarraa na waliin jiran akan hin dhabneef wallaansoo qabaan jira. Kanaaf, sababiin ani kennaa kana fudhachuu danda;eefis kanumaaf."
Dubartiin kun nama kennaa kana isheef kennu ji'oota 18f qaamaan akka wal hin argine dubbatti. Guyyaa guyyaadhaan garuu akka waliin dubbatan himti.
Guyyaa tokko garuu akka qaamaan arguu gammadu isheetti himuu dubbatti.
"Yeroo ani achi gahu ni gammade. Irbaatarratti dhuguu jalqabnee, achiin booda waa'ee kaadhimaa koo na gaafate- Anis liqiin £5,000 akka narra jirun itti hime. 'Na waliin saal-qunnamtii raawwadhuutii animmoo dachaa isaan siif kennaa naan jedhe'."
"Isaabeel" akka jettutti gara kutaa hoteelaa inni qabate waliin deemte. "Yeroo sana miira of xiqqeessuufi wal makaatu natti dhaga'ame. Baay'een ofitti aare."
Haata'u malee, kun hojii sagaagalummaa akka hin taane dubbatti. "Kun walitti dhufeenya yeroo keessa darbauudha.... Sagaagalummaan immoo nama hin beekneef kaffaltiidhaan walii galuudha."
Gareen mirga dubbartootaa, 'Object' jedhamu dubartoonni meeshaa fedhii saal-qunnamtii ta'uu akka hin qabne irratti hojjetu akka jedhetti, dubartoonni maaliif "kennaa nama burjaajessu" kana fudhatan naan hubadha jedha.
Hiitar Birinskaal-Evaans akkas jetti: "Dubartoonni waan kana keessatti hirmaatan jecha sagaagalummaa jedhu dhagahuu hin barbaadan. Dhugaan jiru garuu maallaqaaf jecha qaamasaanii gurguru."
Bakka bu'aan namoota beekkamoo Roob Koopar akka jedhetti, taatee kanarratti dubartoota qofa miti kan irratti hirmaatu.
Namni kun akka jedhetti, dhiirri tokko interneetii irratti gochoota saal-qunnamtii akka raawwatuuf maallaqni ni kennmaaf jedha.
"Namoonni bebbbeekamoo guyyaa guyyaadhaan ergaan akkasii ni ergamaaf jechuu nan danda'a."
Dabalataanis miidiyaan hawaasummaa namoota waan maxxansaniif akka itti gaafatamuu qabanirratti hojjechuu qaba. Namoota fuula miidiyaa hawaasummaa banatanis nama sirrii ta'uu isaa mirkaneeffachuu feesisa.
Fakkeenyaaf, paasportiisaanii yookiin lakkoofsa inshuuraansiisaanii fayyadamuudhaan waan isaan miidiyaa hawaasummaarratti erganiif yookiin maxxansaniif itti gaafatamtoota gochuun ni danada'a.
Dubbi himaan dhaabbata Feesbuulkii akkas jedhan: "Maxxansaalee saal-qunnamtii waliin hidhata qaban Instagram irratti obsa hin qabnuuf.
Namoota seera cabsanis dambii ittiin bulmaata keenyaaf ni adabna. Nuti Instagram iddoo nageenya qabuufi namoonni miirasaanii akka fedhiisaanitti ittiin ibsatan akka ta'u barbaanna."